Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo Kormeeray degmooyin ka Tirsan Muqdisho oo ay ka socdaan hawlo dib u dayactir ah | warsugansomaliya.wordpress.com
Mugdisho(W.S) Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta Kormeer hawleed ku tagay qaar kamid ah xarumaha degmooyinka magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan Mashruuca Danguud ee dib loogu dhisayo xarumaha degmooyinka magaalada Muqdisho ee ku burburay dagaaladii dalka soo maray.
Masuuliyiinta kormeeray xarumaha degmooyinka ayaa waxaa horkacayey gudoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyadda gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar iyo xog-hayaha maamulka gobolka Banaadir C/kaafi Hilowle,masuuliyiintan ayaa jormeerka ku maray xarumaha degmooyinka Wardhiigley,Shangaani,Shibis,C/casiis iyo Kaaraan oo dhammaantood ay ka socdaan Mashruuc dib loogu dhisayo.
Mashruuca Danguud ee dib loogu dhisayo degmooyinka gobolka Banaadir ee uu wado maamulka gobolka Banaadir ayaa si xawli ah uga socda inta badab degmooyinka gobolka Banaadir,Kormeerka masuuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tageex xarumaha degmooyinka Muqdisho qaar ayaa waxa ay ku micneeyeen la socodka iyo qiimaynta halka ay marayaan dib u dhiska lagu samaynayo xaruaha degmooyinka gobolka Banaadir.
Masuuliyiinta ayaa sheegay inuu sii socon doono Kormeerka ay ku marayaan xarumaha kale ee degmooyinka gobolka Banaadir ee maamulka uu ka wado Mashruuca dib loogu dayactirayo,masuuliyiinta ayaa socod ku maray qaybo ka mid ah wadada Wadnaha ee magaalada Muqdisho,iyagoona indha indheeyey burburin ay kooxo aan la aqoon ay ku sameeyeen Nalalka Cad-ceedda Xorraqdaku shaeeya oo Bambaanooyin lagu qarxiyey.
← Xarunta cilmibaadhista puntland oo taagertay go.aanki lagu joojiyay dorashoyinka .warbixin.
Wadan Dadkiisu Aaminsan Yihiin in Hore laga Guursado Hablaha Buur buuran aadna u naaxiya gabdhaha soo koraya →